Fifidianana · Janoary, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana · Janoary, 2012
Tantara mikasika ny Fifidianana tamin'ny Janoary, 2012
Nizeria2011: Taonan'ireo Fandresena Bitika Sy Ireo Sedra Goavana
Afrika Mainty 23 Janoary 2012
Voarakitra anatin'ny tantaran'i Nizeria ny taona 2011 amin'ny maha-taonan'ny fifidianana filoham-pirenena fahatelon'io fanjakana io izany taona izany taorian'ny nahazoany ny fahaleovan-tena. Ho an'ny tapany voalohan'ny taona, hipoky ny resadresaka momba ny fifidianana ny tontolon'ny bilaogy: hetsi-panoherana, fampielezam-kevitra, fifanakalozan-kevitra, ny anjara toeran'ny teknolojia, fanomanana ireo fandatsaham-bato, ary ny andron'ny fifidianana.
Global Voices Amin'ny Teny Frantsay : Ny Safidin'Ireo Mpandika Teny Ny Taona 2011
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 20 Janoary 2012
Ny taona 2011, ireo mpandika teny an-tsitrapo ao amin'ny Global Voices izay miteny Frantsay dia nahavita nandika lahatsoratra an-jatony ary nampahafantatra ny vaovao manerana izao tontolo izao ary tianay ny hiteny hoe "Misaotra!". Nanontanianay hoe inona ny fandikàna nanamarika azy ireo indrindra, nandritra iny taona lasa iny. Ireto ny safidin'ireo mpandika teny Frantsay!
Rosia : Tsy Nahavita Nifankahazo Ny Mpanohitra Tao Saint-Petersbourg
Eoropa Afovoany & Atsinanana 19 Janoary 2012
Ireo hetsi-panoherana talohan'ny fifidianana ny volana Desambra 2011 dia ahitàna karazany roa : 'Mpanohitra matihanina' sy ireo mponina velom-panahiana. Tao Moscou, ireo karazany roa ireo dia nahavita nivondrona mba hanomana ny iray amin'ireo hetsika am-pilaminana isan'ny lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny firenena. Tao Saint-Pétersbourg, na izany aza, ilay famoriam-bahoaka dia nivadihan'ny iray tamin'izy ireo. Maria Lelyuk dia nanadihady ny fanehoan-kevitr'ireo mponina.
India: Ny Tranga Hafahafan'ny Fandrakofana Lamba Ireo Sarivongana Mba Hiantohana Fifidianana Mangarahara
Azia Atsimo 15 Janoary 2012
Naneho hevitra momba ny baiko vao haingana nomen'ny Kaomisionam-Pifidianana Indiana fa hoe ireo sarivongana rehetra ao amin'ny fari-panjakan'i Uttar Pradesh maneho ny Praiminisitra ankehitriny Ramatoa Mayawati sy ny mari-pamantarana ny antokony, ny elefanta, dia horakofana lamba ny Alarbia 11 Janoary 2012.
Tonizia: 2011 An-tsary Amin'ny Valantserasera
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 03 Janoary 2012
Taona mahatalanjona ny taona 2011 ho an'i Tonizia – taona manan-tantara izay hiraikitra ao an-tsain'ny Toniziana rehetra. Izay nanomboka tamin'ny fipoahana tampoka noho ny fahadisoam-panantenana tao amin'ny faritra Sidi Bouzid izay noadinoina sy natao an-kilabao no nivadika fikomiam-bahoaka ho fanadiovana ny firenena, sy hanonganana ny fitondran'i Zeine el Abidine Ben Ali naharitra...